Golaha Wasiirada Somalia oo kulan aan caadi ahayn la yeeshay Golaha Dhaqaalaha Qaranka (Sawirro) - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Golaha Wasiirada Somalia oo kulan aan caadi ahayn la yeeshay Golaha Dhaqaalaha Qaranka (Sawirro)
Golaha wasiirrada Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta warbixin ku saabsan Dib-u-habeynta nidaamka Maaliyadda Dalka ka dhagaystay Golaha Dhaqaalaha Qaranka ee dhowaan la sameeyay oo ka kooban aqoonyahanno.
Shirka Golaha Wasiirrada waxaa guddominayey Ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre, waxayna Golaha ku soo bandhigeen cilmi baaris ay ka sameeyeen istiraatiijiyadda maalgashiga dalka, kobcinta dhaqaalaha, kordhinta dakhliga dawladda, iskaashi dhaqaale oo Soomaaliya ay la yeelato wadamada Bariga Afrika iyo xoojinta dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa.
Golaha dhaqaalaha Qaranka oo adeegsanaya cilmi baaris dheer iyo caddeymo ayaa dawladda kala taliya arrimaha dhaqaalaha dalka, iyaga oo sidoo kale dawladda talo ka siiya diyaarinta iyo dhaqan-galinta siyaasad dhaqaale oo tayo leh taas oo ka caawinaysa isku-dubaridka khayraadka dalka iyo dibadda iyo fulinta qorshayaasha dhaqaalaha iyo maaliyadda dalka.
Madaxweyne Farmaajo oo Amar ku saabsan Qaraxyadii Muqdisho siiyey Taliyeyaasha Ciidamada (Sawirro)
Wasaaradda Warfaafinta: "Dab yar ayaa qabsaday keydka waxaana soo gaaray qasaaro yar" [Sawirro]
Soomaalida Koofur Afrika oo banaabaxay dilalka ku soo batay